Jijjirrama Eegalame Tiksuun dhaloota dhufu biyya gaarii dhaalchisna - Oromia Broadcasting Network - OBN
Itiyoophiyaan biyya bakka bu'ummaa hin qabne, Itiyoophiyummaan ammo ida'ama hedduminaati jedhan Ministeera Muummee Dooktar Abiy Ahimad.
Ergaa kabaja Ayyaana Saboota, Sablammoota fi Uummattoota 13 ilaalchisuun dabarsaniin, eenyummaan Itiyoophiyaa saboota Sablammoota fi Uummattoota biyyattin ibsama jedhaniiru.
Gamtaan saboota tokkummaa fi miidhagina, tokkummaa jechuun ammoo bifa tokko qabaachu jechuu miti jedhaniiru.
Tokkummaan bifa tokkoo yeroof yoo ta’e malee furmaata waaraaf hin ta’u, namoonni tokkummaa akkasii barbaadan dhaabbatanii ollaa akka fakkeenyatti ilaaluu qabu jedhan.
Hedduminni kennaa malee abaarsa akka hin taane hubatamuu qaba jedhan Ministeera Muummee Dooktar Abiy Ahimad ergaa isaanitiin.
Garaagartee yaadaa keessummeessaa biyya jabduu ijaaruuf tokkummaan dhaabbachuu qabna jedhaniiru.
Yaadolii xixiqqaan fudhatamnee biyya jabduu akka hin daganne waan jajjabaarratti yaa xiyyeeffannuunis ergaa isaani keessa tokko.
Uummanni Itiyoophiyaa garaagartee walii lakkaa’ee dallaa ofitti ijaaree cufatee taa’aa hin turre, tokko kan tokkoo dhaalee, garaagartee walii kabajaa ture kan jedhan Dooktar Abiy, biyya jabduu yaadaa walii kabaju ijaaruurratti wal yaa tumsinu jedhan.
Ummanni biyyattii falaasama, aadaa fi duudhaa waliin qaba, garaagarteen isaa afaanii fi daangaa bulchiinsatiin adda ba’ee walirraa fagaatee hin beeku jedhan.
Itiyoophiyaan biyya waliiniti, waliin ijaarre, waliin eegne, waliin asiin geenye, uummanni keessummaa ta’e tokkollee hin jiru, egeree biyyaattis walumaan jaalalaan utubamneet murteessinaan jedhan.
Ayyaana saboota, Sablammoota fi Uummattoota maqaaf kan kabajnu osoo hin taane, Itiyoophiyummaa fi Itiyoophiyaa ol kaasuuf kabajna jedhan.
Total Hits : 53854